Myanmar DCR | နှုတ်ဆက်စကား
"တကယ်လုပ်လျှင် အဟုတ်ဖြစ်မည်၊ ကြိုးစားသည့် လူအတွက် အခွင့်အရေးက အမြဲရှိသည်။"
ဆိုတဲ့ အဓိကခံယူချက်ကို Myanmar DCR Co., Ltd. မှ ဝန်ထမ်းအားလုံးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သဘောပေါက် စေခဲ့ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတိုးပွားလာပြီး လူငယ်နည်းပါးလာသော ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်၊ IT/ဂျပန်စာအရည်အချင်း မြင့်မားတဲ့ မြန်မာလူငယ်များကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ IT လောကနှင့်အတူ မဝေးသောအနာဂတ်တွင် ပြောင်မြောက်သော Brand Image ကို အကောင် အထည် ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သည် DCR Co., Ltd. ၏ နိုင်ငံရပ်ခြားလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသူအနေနှင့် အထူးသဖြင့် တရုတ်နှင့် အာဆီယံ အစရှိတဲ့ နိုင်ငံအများအပြားကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိပြီး လေ့လာရန် အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးများဟာ ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် အလွန်တူသော အချက်များစွာရှိပါတယ်။ အဓိကတူညီသော အချက်ကတော့ တဘက်လူကို ဦးစားပေး စဉ်းစားသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဂျပန်လူမျိုး Customer များ၏ အောင်မြင်မှု အတွက် မြန်မာလူမျိုးများကလည်း ဂျပန်လူမျိုးများနည်းတူ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဟု ထင်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး များဟာ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတများတွင် လိုအပ်ချက်များရှိသည်ကို သိရှိရသောကြောင့် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ အား အမျိုးမျိုးသော IT Training များအပြင် ဂျပန်စာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ Training များကိုလည်း လက်တွေ့သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ တဖန် IT နည်းပညာအပြင် ဂျပန်စာတွင် အရည်အချင်း ရှိသောဝန်ထမ်းများကို ဂျပန်၊ ထိုင်း စသောနိုင်ငံများဆီသို့စေလွှတ်လျက် ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများကလည်း အဆက်မပြတ် တိုးတက်နေသော နည်းပညာများကို အမှီလိုက်ပြီး မိမိတို့ရဲ့အိပ်မက်များကို အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ပြီး ဂျပန် မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ Mr. Yoshihisa Niwa
Mr. Masahiko Kobayashi
Offshore Development တိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ ဘာသာစကား၊ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ကွာဟမှုတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်လူမျိုး ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဂျပန်ရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက် နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့Systemတွေ ရရှိဖို့ System Development အပိုင်းမှာ တာဝန်ယူဦးဆောင် နေပါတယ်။ မနက်ခင်းစုဝေးချိန်၊ အစည်းအဝေး၊ မေးလ်ပေးပို့ခြင်းနဲ့ အမျိုးမျိုးသော အစီရင်ခံရေးသားခြင်းများကို ဂျပန်ဘာသာနဲ့ပဲ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုး စီးပွါးရေးမိတ်ဖက်ထံတွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းလို့ သဘောထားပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Offshore Development Service ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိမှာမြန်မာကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဂျပန်အိုင်တီကုမ္ပဏီတွေများစွာရှိနေပေမယ့် Myanmar DCRကတော့ မြန်မာမှာ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး တည်ရှိနေခဲ့တဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ကတည်းကမြန်မာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးမြန်မာရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်နေပါပြီ။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ[ကျေးဇူးတင်ပါတယ်]ဆိုတဲ့စကားကိုရရှိဖို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အခြေပြု၍ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ Myanmar DCR ဟာ planning၊ design အဆင့်ကစလို့ programming၊ testing နဲ့ maintenance အဆင့်တွေအထိ System Development လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Myanmar DCRဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့၊ Software development နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံကောင်း လိုချင်တဲ့ မြန်မာလူငယ်လေးတွေအတွက် အခွင့်အရေးတွေ ရရှိနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ ဆယ့်ကိုးနှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ဂျပန် နိုင်ငံ ကိုဘေးတက္ကသိုလ်မှ IT Engineering နဲ့ Master ဘွဲ့ ကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲ System Developmentကိုတာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး များစွာသော လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ တွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဂျပန် ဆက်နွယ်မှုကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာစေရန် ဆက်လက်အလေး ထားထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ ဂျပန်မှာလေ့လာရရှိလာခဲ့သော နည်း ပညာ အတတ်ပညာများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ၍ မြန်မာ ပြည့်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ ဂျပန်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကိုပါ အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါ တယ်။ Myanmar DCR မှ လူငယ်တွေကလည်းပဲ ထက်မြက်သော အတွေးအမြင်တွေ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ Customer များရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအပြည့်အဝ ရရှိနိုင်မယ့် အသင့်တော် ဆုံးသော Solution ကို ထိုလူငယ်များနဲ့ အတူတကွ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့် ပါတယ်။
Myanmar DCR ကအဓိကအားဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ကအလုပ်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံက အရည် အသွေးနဲ့ပက်သက်လာရင် အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီကဝန်ထမ်း တွေအတွက် အရည်အသွေးကို ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းကို ရရှိစေပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှလုပ်ငန်းတွေ　ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာ လူငယ်ပရိုဂရမ်မာများအတွက်လည်း အတွေ့အကြုံ ကောင်းတွေကို ရယူပိုင်ဆိုင်　နိုင်တဲ့နေရာ တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ မိမိရဲ့အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက် ကြီးမားတဲ့ လူငယ်များ အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Customerတွေကို စိတ်ကျေနပ်၊ အံ့သြဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံး သော ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်း တွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးသားမှု၊ ကြိုးစားမှု၊ စွမ်းရည်တွေနဲ့ အစဉ်အမြဲကြိုးစားနေသော အရည် အသွေး အဓိက ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှု၊ MDCRရဲ့ တိုးတက် အောင်မြင်မှု ကိုအစပြုပြီး Global အထိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဖို့အတွက် အထောက်အကူ ပြုချင် ပါတယ်။
MDCRက Customerတွေ ယုံကြည်အားထားရတဲ့ကုမ္ပဏီ တစ်ခုပါ။ ဂျပန်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့စရိုက်၊ စကားလုံးတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်သဘော ပေါက်ပြီး ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Technical Skill ကလည်း မြင့်မားပြီးတော့ ဂျပန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Quality ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ISO 9001 ကိုလည်း ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဂျပန်လူမျိုး အထက်အရာရှိ တွေနဲ့အတူ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အမျိုးမျိုးသော Idea တွေပါပူးပေါင်းကာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ Quality၊ Cost၊ Delivery ကို သေသေချာချာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar DCR မှာ တခြား Company များတွင် မရနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် (အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်) ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး စီနီယာမှ ဂျူနီယာသို့ အလုပ်အကြောင်း သင်ကြားပေးခြင်း၊ ဂျူနီယာမှ စီနီယာသို့ လေးစားယုံကြည်မှု ရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်း အကြောင်းအရာ များကို မျှဝေပေးခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အလုပ် လုပ်ကိုင်ရာတွင် အလွန် အဆင်ပြေသော လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ် ပါသည်။
ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကောင်းမွန်သော ဝန်ထမ်းများ စုစည်းပြီး အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော Software များ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ အချိန်မီ အလုပ်အပ်နိုင်ခြင်းတို့ကို အာမခံနိုင်ပါသည်။
အလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို မြင်နိုင်ဖို့အတွက် Myanmar DCR ကို တစ်ခေါက်လောက် လာရောက် လေ့လာကြည့်ပါ။
Myanmar DCRသည် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ကျေနပ်မှုတို့ကို အမြင့်မားဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထက်လူကြီးနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ စီနီယာဝန်ထမ်းများနှင့် ဂျူနီယာဝန်ထမ်းများကြားမှာ အစီရင်ခံခြင်း၊ အကြောင်းကြားခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းတို့ကို ဘယ်အချိန်မဆို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဝန်းကျင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းဟာ MDCR ၏ ထူးခြားသော ဝိသေသ တစ်ခုလို့ထင်မိပါတယ်။ ရိုးသားသော အပြုံးမျက်နှာနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိတဲ့ မြန်မာလူငယ်လေးများအတွက် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်စကား ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆို ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ထူးချွန်ခေါင်းဆောင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ က ဂျပန်၏စံချိန်စံညွှန်းများပေါ် အခြေခံပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော System များကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ အချိန်တိကျစွာ အလုပ်အပ်နှံနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် MDCR နှင့်အတူတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်မယ့် အချိန်ကို သေချာပေါက် စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
Myanmar DCRဟာ မြန်မာမှာ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဟာဆိုရင်လည်း ဂျပန်က ကုမ္ပဏီတွေမှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရင်း ရရှိလာတဲ့
အတွေ့အကြုံတွေကို Myanmar DCRမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Myanmar DCRက ဝန်ထမ်းတွေဟာ နည်းပညာ၊ အခြေခံmanner၊ ဆက်ဆံရေးအစစအရာရာ ကောင်းမွန်ပြီး ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် ကောင်းမွန်တဲ့ communicationကို တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးအထက်လူကြီးများနှင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ မြန်မာလူမျိုးအထက်လူကြီးများရဲ့ လမ်းညွှန်ပြသမှုအောက်မှာ အကောင်းဆုံး Productတွေကို ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Myanmar DCRနဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ကျိန်းသေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မအတွက်အလုပ်ခွင်မှာအရေးအကြီးဆုံးလို့ခံယူထားတာတော့ တဦးနဲ့တဦးရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်းနဲ့ ပူပေါင်းဆောက်ရွက်ခြင်းပါဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိသလို အဆင်မပြေစိတ်ညစ်ရတဲ့အခါလဲရှိမှာ မလွဲမသွေပါပဲ ဒီလိုအချိန်မှာ မျှဝေခံစားပေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းများဟာဆိုရင် အထက်လူကြီး လက်အောက်ငယ်သား မခွဲခြားပဲ တဦးနဲ့တဦး ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အခြေခံပီး နွေးထွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာ အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ် ဒါမှသာအလုပ်ခွင်မှာပျော်ရွှင်လာကာProductivityတွေမြင့်မားပီးQualityကောင်းမွန်တဲ့Productတွေထုတ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါလား Myanmar DCRဆိုတာ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေများရှိတဲ့ကုမ္ပဏီပါ ! SeniorတွေကJoniorတွေကိုအတွေ့အကြိုတွေမိမိတို့ရဲ့အသိပညာတွေကို မျှဝေပေးရင်းနေရုံသာမက Customerရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရရှိအောင်Customerနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ဒါကြောင့်Customerတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်နေပါတယ် Myanmar DCRဆိုတာ Customerရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုအဓိကထားနေတဲ့ကုမ္ပဏီပါ! ကျွန်မတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းထက်ဝက်ကျော်ဟာအသက်၃ဝအောက်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် လန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ideaကောင်းတွေကိုအသုံးချရင်း လူငယ်တွေရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းအများကြီးရှိပါတယ် အချိန်မရွေး ဘယ်သူမဆိုမိမိရဲ့အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြနိုင်တာကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ကြီးမားတဲ့နှစ်လိုဖွယ်တစ်ခုပါပဲ Myanmar DCRဆိုတာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တိုးတက်မှုကနေ ကုမ္ပဏီတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်နေတဲ့ကုမ္ပဏီပါ!
Myanmar DCR ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစောဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သော ဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့ နှစ်နေရာတွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်ရည်ရွယ်၍ QCD (အရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်း၊ အပ်နှံခြင်း) ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းများကိုသာမက မြန်မာ့ပြည်တွင်းမှ လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် System Development လုပ်ငန်းများသာမက Network, CAD ဒီဇိုင်းနှင့် BTO အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်မတို့ရုံး၏ထူးခြားချက်မှာ ဝန်ထမ်းအသစ်များသည်လည်း မိမိ၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်း ကျင်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိ ဝန်ထမ်းများက အလုပ်ဝင်ကာစဝန်ထမ်းများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးရုံသာမက လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပုံနှင့် နည်းပညာကိုကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သင်ကြားပေးပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံအထိ လက်တွဲခေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဂျပန်ဘာသာစကားကို ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ဝန်ထမ်းအားလုံး ဂျပန်စာအရေး၊ အဖတ် လုပ်နိုင်ပြီး ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်ကောင်းမွန်စွာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆိုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဂျပန်ဘာသာစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန် နေ့စဉ်ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကိုအခြေခံ၍ အလုပ်ဝင်ခါစဝန်ထမ်းများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရင်း မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကျေနပ်မှု ပိုမိုရရှိစေရန် နေ့စဉ်ကြိုးစားအားထုတ်နေပါသည်။ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့နှင့်အတူတကွ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြည့်ကြပါစို့လား?
Ms. Arakawa Chie
System Development ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်လာတာ ၁၅နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အများကြီး သင်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ Myanmar DCR မှာ ၂၀၁၉ ဧပြီလမှ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ITသာမက ယဉ်ကျေးမှူအရာမှာပါ ဂျပန်နဲ့မြန်မာရဲ့ ပေါင်းကူးဆက်သွယ်မှူကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။
ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။
TEL : +၉၅-၁-၈၂၄-၈၀၅၃
Block1၊ Unit12၊ မင်္ဂလာမန္တလေး Project Building၊
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ မြန်မာ။
TEL : +၉၅-၂-၂၀၀-၀၀၀၈